Ninkii CIA u waraystay markii Saddam Xuseen la qabtay | Hobyo Media Online
Ninkii CIA u waraystay markii Saddam Xuseen la qabtay
Markii gacanta lagu dhigay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen 2003, waaxda sirdoonka Maraykan ee CIA waxay u baahatay khabiir haybtiisa xaqiijin kara oo su’aalo weydiin kara si xog looga helo. Qofkaas wuxuu ahaa John Nixon.
Nixon wuxuu darsayey Saddaam tan iyo markii uu CIA ku biiray 1998. Kaalintiisa ayaa ahayd inuu xog waafi ah ka uruuriyo hogaamiyeyaasha dunida, oo uu taxliiliyo waxa madaxdaas adkaynaya, wuxuuna uga warramay barnaamijka BBC ee BBC’s Victoria Derbyshire programme.
Markii ay akhbaartaas timid, Maraykanku wuxuu u baahday inu isaga xaqiijiuo haybtiisa.
Godkii uu Saddan Xuseen ku dhuumanayay markii la qabtay
Waxaa jiray warar la isla dhex marayey xilligaas oo ah in Saddaam uu isbeddel xagga jirka ah ku dhacay, laakin Nixon oo CIA ka tegey 2011 wuxuu yiri ” shaki igama inuu isaga yahay markii aan arkay”.
“Markii aan hadalka ku billaabay wuxuu ii eegay sidii aan muuqaalkiisa ku arkay bug kiisa ah oo miiska xafiiska muddo sanooyin ah ii saarnaa” ayuu yiri.
Nixon wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee waraysi dheer oo maalmo qaatay la yeesha Saddaam. Wuxuu qoray bug la magac baxay Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein.
Markii Saddam Xuseen la qabtay ka dib
Wuxuu sheegay in dhinaca insaannimada ee uu ka arkay Saddaam uu aad uga soo horjeeday masawirkii ay warbaahinta Maraykanku ka bixiyeen.
“Wuxuu ka mid ahaa dadka shaqsiyadoodu soo jiidashada leedahay ee aan la kulmay” ayuu yiri, wuxuuse intaa ku daray inuu mararka qaar isku beddelayey qabiix kibir badan oo dabeecad xun.
Sanadkii 2016-kii Saddam waxaa lagu helay in uu galay dambiyo aadanaha ka dhan ah
Nixon wuxuu sheegay inuu ka qajilo wixii Ciraaq ka dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray Saddaam Xuseen.
Wuxuu sheegay in maamulkii Bush uusan wax fiiro ah siinin waxa imaan kara marka Saddaam meesha laga saaro. Dhanka soo shaac bixidda kooxaha xagjirka ah, sida kooxda loogu yeero dawladda islaamiga, ayuu sheegay inuu rumaysan yahay in Ciraaq ay wanaagsanaan lahayd haddii uu Saddaam sii joogi lahaa.